Sida Loo tirtiro Koontada Samsung Gebi ahaanba | Madasha Mobile -ka
Ignacio Sala | 24/09/2021 16:00 | Android, Tababarada
Muddooyinkii ugu dambeeyay waxaan aragnay sida imaatinka taleefannada casriga ah lala xiriiriyay a ballanqaadka daacadnimada ee soo -saaraha / nidaamka deegaanka. In kasta oo si loo adeegsado taleefanka Google loo baahan yahay, haa ama haa, koonto Gmail ah, marka laga hadlayo Apple, waa inaan ku abuurno koonto madalkooda (maahan inay la xiriirto goob email gaar ah).
Xisaabaadkaan iibsiyada oo dhan waxay la xiriiraan in aan ku fulinno hab -dhismeedkooda deegaan oo ay had iyo jeer joogi doonaan ilaa aan ka noqonno xisaabta. Waxaan beddeli karnaa moobilkayaga inta jeer ee aan rabno oo aan sii wadno ku raaxaysiga dhammaan iibsiyada aan ku samaynay koontadaas.
Isla sidaas oo kale waxay ku dhacdaa xisaabaadka Samsung, oo kale oo ka mid ah soo -saarayaasha ku soo booday koontooyinka. si ay u sii haystaan ​​isticmaaleyaasheeda. Samsung waxay diyaar u tahay dhammaan iibsadayaasha mid ka mid ah alaabteeda, adeegyo taxane ah oo adeegsadayaashan kaliya ay ku raaxaysan karaan.
1 Waa maxay xisaabta Samsung
2 Maxaan ku samayn karnaa koontada Samsung
2.1 Ku samee lacag bixinta Samsung Pay
2.2 Hel mobile -ka haddii aan luminno
2.3 Helitaanka codsiyada gaarka ah
2.4 Helitaanka Dukaanka Samsung
2.5 Guriga Samsung
2.6 Samee nuqullo gurmad ah
3 Koontadu ma u qalantaa koonto Samsung?
4 Sida loo abuuro koonto Samsung
5 Sida loo tirtiro koontada Samsung
Waa maxay xisaabta Samsung
Xisaabaadka Samsung, sida xisaabaadka Google iyo kuwa aan u abuurnay inay adeegsadaan iPhone, waxay na siiyaan taxane ah dheefaha dheeraadka ahFaa'iidooyinka laga heli karo oo keliya alaabooyinka soo -saarahaan, inkasta oo qaarkood ay isku mid yihiin Google iyo Apple labaduba na siiyaan.
Maxaan ku samayn karnaa koontada Samsung
Ku samee lacag bixinta Samsung Pay
Faa'iidada ugu weyn ee haysashada akoon Samsung ah ayaa annaga gacanta ku haya madal bixinta Samsung, oo la yiraahdo Samsung Pay. Madalkan lacag -bixinta ayaa aad uga baahsan Google Pay iyo xitaa in ka badan Apple Pay.
Hel mobile -ka haddii aan luminno
Haddii aan lumino aragga taleefankeenna casriga ah, waxaan u mahadcelineynaa koontadayada Samsung waan awoodi doonnaa inaan helno si deg deg ah meesha casriga ah. Haddii tani dansan tahay, madalkani wuxuu na siin doonaa goobtii ugu dambaysay ee la heli karay inta uusan ka dhammaan batteriga ama la damiyo.
Shaqadan, sida tii hore, Google ayaa sidoo kale na siisa iyada oo loo marayo maareynta Aaladda Qalabka.
Helitaanka codsiyada gaarka ah
Qalabka caafimaadka Samsung, Samsung Health, ayaa daryeela la soco dhaqdhaqaaqa jirka oo dhan iyada oo la mariyo dharkooda. Mashruucan, oo sanado yar ka fog Google Fit, waxaa heli kara oo keliya dhammaan isticmaalayaasha taleefanka Samsung.
Helitaanka Dukaanka Samsung
In kasta oo dhammaan taleefannada casriga ah ee Samsung ay heli karaan Dukaanka Play, haddana Samsung waxay u oggolaanaysaa dhammaan macaamiisheeda inay galaan dukaankeeda, bakhaar aan ka heli karno codsiyo gaar ah iyo meesha sidoo kale waxaa jira codsiyo badan oo laga heli karo Play Storemarka laga reebo Fortnite.
Helitaanka ciyaaraha iyo codsiyada ka sokow, Dukaanka Galaxy waxaan ka heli doonaa a tiro badan oo ah mawduucyo gaar ah iyo waraaqaha darbiga oo loogu talagalay taleefannada casriga ah, qaar ka mid ah darbiyada derbiga oo aanan ka heli doonin Dukaanka Play.
Samsung Home waa Madal otomaatiga guriga Samsung, kaas oo aan meel fog ka maareyn karno qalabka guriga ee soo saarahaan, sida dhaqa, qalajiyaha, qaboojiyaha iyo sidoo kale telefishinnada iyo kuwa ku hadla.
Samsung ayaa noo oggolaaneysa inaan sameyno nuqullada kaydinta ee dhammaan xogta la kaydiyay Terminalkayaga adigoon boos ka qaadan Google Drive, maadaama dhammaan xogta lagu keydiyo daruurta Samsung
Intaa waxaa dheer, waxay sidoo kale noo oggolaaneysaa inaan sameyno a kaydinta dejinta aaladdayada, hawl noo saamaxaysa inaan si dhakhso ah u soo celinno taleefankeenna casriga ah annaga oo aan saacado ku bixin dib -u -habaynta aaladda.
Koontadu ma u qalantaa koonto Samsung?
Haddii aad si joogto ah u isticmaasho badeecadaha Samsung, ha ahaato taleefannada casriga ah, saacadaha smart -ka ah, kiniiniyada, telefishannada, kuwa ku hadla ama qalabka guriga, sida iska cad haddii ay mudan tahay in la abuuro akoon Samsung ah.
Waad ku mahadsan tahay koontadan, waxaan awood u yeelan doonnaa inaan si dhakhso leh u soo celinno dhammaan xogta nuqullada gurmadka ee aan abuurno. Intaa waxaa dheer, waxay noo oggolaaneysaa inaan ka maamulno aaladaha intiisa kale meel fog. Sidoo kale, haddii aan haysanno kiniin Samsung iyo casriga ah, waan awoodnaa jawaabaha si raaxo leh ugu soo wac kiniinka, sii wad la shaqeynta isla codsi ku jira kiniinka ...
Haddii aad haysato hal Samsung oo kaliya Mana lihid wax alaab kale ah oo Samsung ah, runtii uma qalanto sameynta koonto Samsung, maadaama aanaan ka faa'iideysan doonin wixii ka baxsan mawduucyada ama darbiyada gidaarka.
Si aad u samayso nuqullo gurmad ah, hadda waxaan haysannaa 15 GB oo bilaash ah oo ay Google na siiso. Codsiyada laga heli karo Dukaanka Samsung, marka laga reebo Fortnite, waa isku mid oo aan ka heli karno Dukaanka Google Play.
Lahaanshaha koontada Samsung ayaa noo oggolaanaysa ka faa'iidayso is -dhexgalka dhammaan alaabtaada iyada oo loo marayo koonto keliya, si aad ugu eg waxa Apple noo soo bandhigto, laakiin aan ahayn Google.
Maanta, dhexgalka aaladda wuxuu ku kooban yahay nidaamka deegaanka, tan iyo habkan waajibaadka adeegsadayaashu inay sii wataan iibsashada alaabtooda si ay uga faa'iidaystaan.
Sida loo abuuro koonto Samsung
Si loo abuuro koonto keliya, waxaan haysannaa laba ikhtiyaar:
Laga soo bilaabo bogga rasmiga ah ee Samsung
Laga soo bilaabo dalabka Dukaanka Samsung ee lagu rakibay aaladda
Si aad akoon uga samaysato mareegaha Samsung, guji tan isku xirka oo guji Create account.
Marka xigta, waxaan ku calaamadineynaa kuraasta Helitaanka wararka waxayna bixisaa xulashooyin waxaanna wanaajineynaa shaqsiyeynta wararka iyo dalabyada gaarka ah haddii aan rabno, Waa ikhtiyaar oo guji Aqbal.
Kadib waxaan galnaa emaylkayaga, furaha sirta ah, waxaan dib u qornaa isla erayga sirta ah, magaca hore, magaca dambe iyo taariikhda dhalashada.
Ugu dambayntii, arjiga ayaa na siin doona ikhtiyaarka awood aqoonsi laba-tallaabo ah. Shaqayntani waxay u baahan tahay lambar taleefan oo noo soo diri doona furayaasha ku -meelgaarka ah mar kasta oo aan galno taleefanka casriga ah ee Galaxy ama aan galno websaydhka xubinta Samsung.
Si aad ula xiriirto taleefanka casriga ah ee Galaxy -ga koontada Samsung, waa inaan ku qasbanaannaa gal barnaamijka Samsung Store.
Tallaabooyinka lagu abuurayo koonto iyada oo loo marayo arjiga Dukaanka Samsung waxay la mid yihiin sida mareegaha, dhab ahaantii, isla bogga mareegaha ayaa la soo bandhigaa sida marka aan koonto ka furaynno biraawsar.
Sida loo tirtiro koontada Samsung
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan sameyno waa inaan marinno websaydhka Samsung tan isku xirka oo geli xogta koontadayada.
Marka xigta, dhagsii Perfil.
Gudaha Profile -ka, guji Maamul Xisaabta Samsung.
Ugu dambayntii, guji xisaabta Delete, calaamadee sanduuqa waan ka warqabaa xaaladaha aan kor ku soo sheegay waxaana oggolahay inaan tirtiro koontadayda Samsung iyo taariikhda adeegsiga.
Waxaan xaqiijineynaa inaan dooneyno inaan tirtirno akoonka annagoo gujineyna Delete.
Maskaxda ku hay in geeddi -socodkani yahay mid aan dib loo noqon karin. Markaan xaqiijinno inaan rabno inaan tirtirno koontada, ma heli doonno qaab aan dib ugu soo ceshanno, taas oo nagu qasbi doonta inaan abuurno mid cusub.
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Tababarada » Sida gebi ahaanba loo tirtiro koontada Samsung